I-Bozoma Saint John ithembisa umxholo okhethekileyo kwi-Apple Music | IPhone iindaba
I-Bozoma Saint John ithembisa umxholo okhethekileyo kwi-Apple Music
Siyazithanda ezi ndlebe zodliwanondlebe ezivela kumasebe athile eApple zihlala zinika abezindaba abanomdla. Sihlala sikhupha umxholo onomdla kolu dliwanondlebe, nangona iApple kunye nabasebenzi bayo bahlala belumke kakhulu xa kufikwa ekufumaneni isimanga esizayo. Ngeli xesha yayinguLarry Jackson, Bozoma Saint John, kunye noZane Lowe, bonke abanxulumene neApple Music, ngubani Banikezele ngezinto zokuqala ezinomdla malunga nento eza kuza kwindawo yomculo yenkampani yaseCupertino. Ukuvela kweApple Music akubonakali kusondele ekumiseni, uhlala uzama ukuba linyathelo elinye phambi kokhuphiswano.
Abathathu abaphathi beApple banike udliwanondlebe Complex, apho ku Basicela ivoti yokuzithemba ngenkonzo yomculo efike emva kwexesha kodwa wenza ingxolo enkulu.
Sisebenza kwinto ekhethekileyo kwaye sinethemba lokuba abantu bayakuyihoya. Umbono wam kwiminyaka emihlanu ukusukela ngoku kukuba wonke umntu okwiplanethi uzimisele ukusebenzisa iApple Music. Ndicinga ukuba senze into ebaluleke kakhulu. Andiqondi ukuba ukhona umntu onokuyenza le nto siyenzileyo. Ndicinga ukuba ungqubano nezinye iinkonzo zilungile. Sinexesha lonke emhlabeni kwaye ngekhe sisoyika, sihamba nayo yonke into- IBozoma Saint John
La ibingamagama abayalele, ngelixesha bayakuxela oko I-Apple iyaqhubeka nokusebenza kumxholo wee-audiovisual ezinxulumene neApple Music ezinje nge "Vital Signs" kulawulo lukaGqr Dre, ekhatshwa ngumboniso kamabonakude "Carpool Karaoke" uApple ayifumene kwiinyanga ezimbalwa ezidlulileyo kodwa engabonakali ngathi iqhushumile, ngesandla sikaJames Corden, umtsalane Umboniseli osele ebeka amanani afanelekileyo kuwo onke umculo kunye neepanorama ezingezomculo emotweni yakhe.
Umendo opheleleyo kwinqaku: IPhone iindaba » iPhone » Ezahlukeneyo » I-Bozoma Saint John ithembisa umxholo okhethekileyo kwi-Apple Music
Injineli yangaphambili ityhola iApple ngokudikwa nguTim Cook
I-iPhone yam ibonisa umyalezo "i-SIM Engasebenziyo". Ndiyisombulula njani?